FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA POMIMO - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Pomimo
Alika Amerikanina Eskimo / Pomeranian Amerikanina mifangaro
Meyah the Pomimo amin'ny 2 taona— 'Meyah no alika tsara indrindra nananako hatramin'izay. Hendry tokoa izy ary mpiara-miasa lehibe amin'ny fianakaviana iray manontolo. Alika tiana tokoa izy. '
Ny Pomimo dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Amerikanina Eskimo ary ny Pomeranian . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Tawni no Pomimo ahy, aseho eto amin'ny 2 taona. Izy no alika hendry sy haingana indrindra nananako hatramin'izay. Tiany ny mihira miaraka isaky ny mijery American Idol izahay, ary tiany matory eo am-pofoanao. Tena i Tawni mora vaky trano SY fiaran-dalamby . Handeha any anaty tranony izy amin'ny alina hatory nefa tsy angatahinao akory. '
Arotsaho vola ny Pomimo (Pomeranian / American Eskimo mix) amin'ny alàlan'ny alika kely amin'ny 5 volana
Volao ny Pomimo (mix Pomeranian / American Eskimo) amin'ny 1 taona
'Ity no Pomimo antsoina hoe Sandie, ary na dia somary nibanjina aza izy rehefa nahita azy toy ny alika kely tao amin'ny Humane Society, dia nivadika alika mahafinaritra sy mahafatifaty izy. Tsy fantatsika raha natao ho 'alika mpamorona' izy na sendra lozam-pifamoivoizana, fa mbola tsy nihaona tamin'i Pomimo hafa mihitsy isika. Ka faly izahay nahita Pomimo hafa tao amin'ny tranonkalanao ary fantatray fa tsy irery izy! Sandie dia manana loko jiro Pom, fa ny vatan'ny an Eskie . Sahabo ho 18 pounds eo ho eo izy ary manan-tsaina, be fitiavana ary mahaleo tena. '
Sandie the Pomimo toy ny alika kely amin'ny 10 herinandro
Pushkin the Pomeranian / American Eskimo mix— 'Ity dia sarin'i Alika Pushkin, nodimandry. Alika nahafinaritra sy nahafinaritra izy. Toetra tsara. Matetika izy no diso tamina alika kely nandritra ny androm-piainany. Sahabo ho 18 lbs no salan'asany. Tsara fitondran-tena, mandefitra be amin'ny ankizy na dia nanao zavatra mety hahasosotra azy aza izy ireo. Tena ara-tsosialy, tia miaraka amin'ny olona. Tia mihinana karaoty. Matetika izy dia nandany 3-4 minitra 'nanamboarana ny fandriany' nanamboatra lamba firakotra sy lamba famaohana mba hahazoany tsara. '
'Ity no Gizmo biby fiompinay. Izy dia fifangaroan'ny Pomeranian / Amerikanina Eskimo aseho eto amin'ny faha-5 taonany. Teraka tamin'ny alin'ny Noely izy. Tena be resaka izy ary manana Fomban'ny mpanjaka aho . Fa ity mpanjaka ity dia tia mihodina amin'ny fotaka mihady kankana. YUCK !!!! Tsy fofona tsara tarehy io. '
Manana Pomimo antsoina hoe Foxxy izahay. Izy dia 3/4 Pomeranian ary Eskimo amerikana kely indrindra 1/4. Izy dia toy ny alika kely efa 3 volana.
Murray the Pomimo amin'ny faha-3 taonany
Hijery ohatra hafa momba ny Pomimo
Sary Pomimo 1
Bulldog frantsay frantsay 3 volana
bulldog amerikanina manga sy fotsy
antsasaky ny antsasaky ny mpanao ady totohondry bulldog anglisy